Banyere Anyị - Golden Triangle PCB & Technologies Co., Ltd
Igba Chart of Quality Management
Usoro Flow Chart
Ya mere, anyị na-eme na ike a àkwà mmiri, nke na-enyo gị echiche ma ọ bụ imewe n'ime a ngwaahịa na ugbu n'ihu ahịa site na àjà a pụrụ ịdabere na n'ichepụta ngwọta na engineering support, gụnyere New Product Introduction (NPI), E Bipụtara Circuit Board (PCB) imewe, E Bipụtara Circuit Board Assembly (PCBA), casing (plastic & echiche) ngwọta.
Anyị na-àjà PCB n'ichepụta na nzukọ ọrụ na-esonụ nnukwu ahịa n'ụwa nile.
Anyị na-n'ụzọ zuru ezu mere ka gị pụrụ ịdabere na electronic n'ichepụta ọrụ ibe.
Ka anyị na-arụ ọrụ ọnụ iji fullfil gị n'ọma ahịa mgbaru ọsọ.
Okwu: Golden Triangle PCB & Technologies Ltd